Sunday January 23, 2022 - 16:45:18
Weerar khasaasra dhaliyay ayaa markale ka dhacay mid kamida gobollada dalka Kenya ee ay sida aadka ah ugu xooganyihiin dagaalyahannada Jihaadiga ah.
Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan 8 gaari oo kamid ahaa gaadiidkii ka shaqeynayay mashruuca dekadda gobolka Lamu la guby kadib markii ay weerar kala kulmeen rag hubaysan oo loo malaynayo Al Shabaab.
Gaadiidkaan ayaa lagu gubay inta u dhexeysa deegaanada lagu kala magacaabo Kwa Omolo iyo Bodhei oo ku yaalla wadada xiriirisa gobollada Lamu iyo Gaarisa.
Saraakiil katirsan booliska Kenya ayaa xaqiijiyay in gaadiidka la gubay ay ka shaqaynayeen mashuurca Lapsset oo ah mashruuc lagu dhisayo dekad iyo wado tareen oo isku xerta wadamada Kenya, Itoobiya iyo Koonfurta Suudaan.
Irungu Macharia oo ah madaxa ammaanka gobolka Lamu ayaa warbaahinta u sheegay in aysan ogeyn in khasaara nafeed uu ka dhashay weerarka iyo inkale wuxuuna falkan ku eedeeyay dagaalyahanada Al Shabaab ee aadka ah uga dhaq dhaqaaqa mandiqadda.
Tan iyo bilaawgii bishan ayay xoogaga Jihaadiga ah howlgallo dhiig badan ku daatay ka fulinayeen deegaannada gobolka Lamu, weeradan ayaa sababay dhimashada ku dhowaad 20 ruux oo ay ku jiraan saraakiil katirsan ciidanka Booliska.